अब नयाँरुपमा त्रिभुवनचोक, स्तम्भ माथि देशको झण्डा अनि नक्सा ! - Arthapage
अब नयाँरुपमा त्रिभुवनचोक, स्तम्भ माथि देशको झण्डा अनि नक्सा !
प्रकाशित मितिः २१ भाद्र २०७७, आईतवार १७:०१ September 6, 2020
नेपालगन्ज २१ भदौ : नयाँरुपमा त्रिभुवनचोकमा काम शुरु भएको छ । राजनीतिक कोपभाजनको सिकार बनेको त्रिभुवनचोकलाई नयाँरुप दिने विषयमा सर्वपक्षिय सहमति बनेपछि काम शुरु भएको छ । राजा त्रिभुवनको शालिक भएदेखि सबैको जनजिव्रोमा त्रिभुुवनचोक झुण्डिएको छ ।
त राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा टुटफुट हुँदै राजाका सालिकहरु तोड्ने क्रममा त्रिभुवनचोक पनि त्यसैको सिकार बन्यो । चोक कस्तो बनाउने र के नाम राख्ने भन्ने सबैका आ–आफ्ना दावीका बीच नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले केही समय अघि सर्वपक्षिय सहमति जुटाएको छ । सोही सहमति अनुसार काम गर्न यतिबेला मजदरहरु खटिएका छन् ।
चोक निर्माणस्थलमा अब बन्ने स्तम्भको स्वरुप समेत राखिएको छ । जसमा सबैभन्दा माथि देशको झण्डा र स्तम्भमा नक्सा राखिने उल्लेख छ । लामो समयदेखिको विवादको केन्द्र बन्दै गएको त्रिभुवनचोक अब भने नयाँरुपमा तयार हुने भएको छ । टुटफुट पछि कुरुप बनेको त्रिभुवनचोकमा बन्ने स्तम्भले देशको पहिचान झल्काउने छ । सम्भवत आआफ्ना दावी अघि सारेका पक्षले देश झल्काउने यिकै कुरामा सहमित गरेकी ?
प्रकाशित मितिः २१ भाद्र २०७७, आईतवार १७:०१ |
Prevकोरोनाको हटस्पट बन्यो बाँसगढीस्थित चौधरी समूहको सिजी फुड्स
Nextएकैदिन खजुरामा १९ सहित बाँकेमा ३८ जना संक्रमित थपिए